डेरामा पुगेर ढोका लगाएर पिटेर गाडीमा ल्याएका अपराधी संग कसरी भयाे मुटभेट ? प्रायोजित इन्काउन्टर जसले अपराधको उद्देश्य छोपियो ! - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
डेरामा पुगेर ढोका लगाएर पिटेर गाडीमा ल्याएका अपराधी संग कसरी भयाे मुटभेट ? प्रायोजित इन्काउन्टर जसले अपराधको उद्देश्य छोपियो !
मङ्लबार, साउन २२, २०७५ (August 7, 2018, 8:47 am) मा प्रकाशित
चियापसलकी सञ्चालकसँग ४० लाख फिरौती माग नै संकास्पद, रहस्य उजागर गर्न भन्दा, पर्दा लगाउने हतारमा प्रहरी
किनकि, मोबाइल किन्न स्वयं गोपाल गएका थिए र उनीहरू दुवैजना चार वर्षदेखि पसलका नियमित ग्राहक थिए । तर, सबै अवस्था थाहा भएका आरोपीले बालककी आमासँग ४० लाख रुपैयाँ मागेको घटना आपैmँमा आश्चर्यजनक छ । त्यसकारण पनि अपहरणको उद्देश्य पैसा मात्र नभएर अन्य प्रतिशोध पनि हुन सक्छ । घटनामा दुईजना मात्र नभएर पर्दापछाडि अरू पनि संलग्न हुन सक्छन् । तर, प्रहरीले आरोपी दुवैजनालाई कठघरामा उभ्याएर रहस्य उजागर गर्न होइन, पर्दा लगाउन हतार गरेको छ ।
घटना विवरणअनुसार अपहरणकारी भनिएका दुवैजना आरोपी पेसेवर अपराधी होइनन् । किनकि, अपहरण र हत्यापछि बालकको शव खाल्डोमा पुरेर उनीहरू आफ्नो डेरामा पुगेका छन् र लुगा धोएर रेलिङमा सुकाएर सुतेका छन् । त्यति मात्र होइन, बालककी आमालाई समेत फोन गरेर फिरौती मागेका छन् । यति गरिसकेपछि पनि आफ्नै कोठामा सुत्ने उनीहरू अपराधी नै भए पनि पेसेवर होइनन् । तर, प्रहरीले लास देखाउँदा उनीहरूको हातमा पेस्तोल छ । प्रहरीलाई फायरिङ गर्दै जंगल–जंगल भागेकाले जवाफी कारबाहीमा मारिएको भनिएको छ । गोलीले शरीर क्षतविक्षत हुँदा पनि हातमा पेस्तोल छुटेको छैन । (नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारबाट)